သင်၏ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်ဆံပင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြံဥာဏ် | ခွငျကောငျ Nits
သင်၏ဆံပင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်နှင့်ကျန်းမာစေရန်, စိုစွတ်သောအခါသင်မဖြုတ်သင့်ပါ. သင်၏ဆံပင်သည်စိုစွတ်သောအခါပိုမိုလွယ်ကူစွာကျိုးပဲ့ပျက်စီးတတ်သည်. To reduce damage done while brushing, brush it before you wash it and then wait until it is fully dry before brushing it again.
Your diet might be to blame if you have dull, lifeless hair. Your hair needs iron, ဗီတာမင်အီး, omega-3 fatty acids, and other important vitamins and nutrients in order to keep it as healthy as possible. သင်၏အာဟာရဓာတ်များကိုသာအာဟာရပြည့်ဝစွာမရရှိနိုင်ပါကပြည့်စုံသော multivitamin ကိုသင်သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ.
အကြံပြုချက်! Think about what you’re eating if your hair appears to be lifeless or dull. Eating plenty of omega-3 fatty acids, သံ, vitamin E and other essential nutrients is important for keeping your hair healthy.
အကြံပြုချက်! Try using products that have sunscreen in them to protect the hair from sun damage. The sun can be damaging to your hair and eliminate any benefits you may gain from your care routine.
အကြံပြုချက်! Damaging your hair isareal possibility when you blow dry it. အေးမြသောလေထုအနေအထားကို သုံး၍ သင်၏လေမှုတ်စက်ကိုအစဉ်မပြတ်ရွေ့လျားခြင်းဖြင့်ထိုသို့ပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
Tags:: cold weather, ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှု, healthy hair
« Luscious ဆံပင်အတွက်သင်လိုအပ်သမျှ